xclip: Kashifida boodhka ka soo baxa khadka taliska | Laga soo bilaabo Linux
Getafix | | Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
El xaraash o xadhkaha waa aalad adeegaha X ee nidaamkayaga qalliinka uu noogu deeqo si aan ula wadaagno macluumaadka u dhexeeya codsiyada.
Wuxuu masuul ka yahay hawlgalada soo noqnoqda sida gooyay, nuqul y pegar. Waxay ka kooban tahay nooc bakhaar ama keyd ah oo ay barnaamijyadu ku kaydin karaan xogta si hadhow loogu isticmaalo isla ama barnaamijyada kale.
Guud ahaan, dhamaanteen waan ognahay sida loogu adeegsado dhinaca aragtida isticmaale ahaan, iyadoo loo marayo menusyada dalabka, ama habka loo maro kumbuyuutarrada, badanaa
Ctrl+V Si aad u saarto
Si kastaba ha noqotee, maxaa dhacaya marka aan rabno inaan adeegsanno sabuuradda a script?
3 Codsi wax ku ool ah
xaydasho waa codsi noo ogolaanaya inaan ku galno qoraalka sabuuradda isla markaana aan kala soo baxno qoraalka khadka taliska. Qoraalka la soo helay waxaa suuragal ah inuu soo galay codsi kale.
Sidoo kale, qoraalka lagu qoro sabuuradda dhexdeeda xaydasho waxaa isticmaali kara codsi kasta oo kale.
Xidhmada xaydasho waxaa laga heli karaa keydadka ugu badan ee qeybinta. Tusaale ahaan, Ubuntu uma baahnid wax ka badan apt-get si aad u rakibto:
Isticmaalkeeda aasaasiga ah waa mid aad u fudud. Si aad u geliso qoraalka gelinta caadiga ah boodhka, ikhtiyaarka waa in la cayimo -i:
Qoraalka "Hello world" ayaa loo heli doonaa inta ka hartay codsiyada. Sidoo kale, in qoraalka laga soo qaado sabuuradda oo loo diro wax soo saarka caadiga ah, ikhtiyaarka -o:
$ xclip -o waad salaaman tahay adduunka
Kabadhku wuxuu na siiyaa seddex meel ama xulashada kala duwan:
MADAXWEYNAHA: Waa keydka caadiga ah. Waxay kaydisaa qoraalka si fudud iyada oo lagu calaamadeynayo tilmaamaha, iyada oo aan loo baahnayn in la riixo furayaasha isku dhafan ama ikhtiyaar kasta oo ku yaal liiska.
QALABKA: Kaydkaani waa midka ugu badan ee ay adeegsadaan codsiyada. Waxay keydineysaa qoraalka uu xushay calaamadda kaliya marka aad riixdo isku darka furaha ama ikhtiyaarka menu-ka si aad u dhinto ama u nuquliso.
LABAAD: Waa keyd gargaar oo madaxbannaan. Waa si buuxda loo heli karaa laakiin si dhif ah ayey u adeegsadaan codsiyada sida caadiga ah. Waxaa loo isticmaalaa oo keliya ujeedooyin gaar ah.
xaydasho wax ka qaban kara dhammaan saddexda kayd. Kaliya waa lagama maarmaan in la caddeeyo midka aan dooneyno inaan isticmaalno, iyada oo loo marayo ikhtiyaarka -dhinta iyo xarafka ugu horeeya ee magaca keydka ah. Sida caadiga ah, keydka ayaa la isticmaalaa MADAXWEYNAHA.
Tusaale ahaan, si loo helo qoraalka lagu gooyay codsi kale, waa inaan sheegnaa inaan dooneyno nuxurka soo saarida keydka QALABKA, oo leh xulashooyin -o y -qeybinta c
Codsi wax ku ool ah
Qalabka xaydasho waxay bixisaa fursado badan. Waxay badanaa waxtar leedahay qoraallo, halkaasoo aanan fursad u lahayn inaan adeegsanno tuubbooyin kumbuyuutar, maaddaama geeddi-socodyada si madax-bannaan loo fulinayo.
Aynu tusaale u soo qaadanno: aan qiyaasno in aan rabno in aan awood u yeelanno in aan raadino erey kasta oo ka muuqda barnaamij kasta ama bogagga ku jira tixraaca ereyga si loogu turjumo ingiriis ama ingiriis hal qodob oo kaliya.
Ugu horreyntii, waa inaan ogaanno qaabka URL-ka ee xuduudaha loo gudbiyo websaydhka la tegayo. Xaaladdan oo kale waa kuwa soo socda:
Markaan taa ogaanno, waa inaan si fudud u abuurno a script waxaad ku fureysaa urlkan tusaale ahaan Firefox, beddelaad Erey iyadoo la raacayo lambar u dhigma oo soo celinaya qoraalka laga helay sabuuradda.
Waxaan u wici doonnaa, tusaale ahaan, wordreference.sh, waxayna ka koobnaan doontaa waxyaabaha soo socda:
Ugu dambeyntiina, mar haddii aan badbaadinnay kuwayaga script waana bixinay rukhsad dil, waa inaan ku lifaaqnaa toobiye kumbuyuutarka maamulaha desktop-ka. Tusaale ahaan, waxaan u xilsaaray isku darka Ctrl+G. Annaguna diyaar ayaannu u nahay.
Hadda waa inaan isticmaalnaa oo keliya. Waxaan ku calaamadeyneynaa ereyga erey kasta oo aan dooneyno inaan turjunno oo aan riixno Ctrl+G. Waxaan arki doonnaa sida, iyada oo aan la sii dheerayn, biraawsarka lagu furo bogga u dhiganta tarjumaadda ereyga calaamadeysan.
Waa hab wax ku ool ah in had iyo jeer gacanta lagu hayo turjubaanka iyada oo aan loo baahnayn in la rakibo codsiyo qaamuus.
Intaas waxaa sii dheer, isla qaabkan ayaa loo isticmaali karaa in lagu weyddiiyo bog kale oo webka ah, sida Google, Wikipedia ama goob kale oo noo oggolaaneysa inaan sameyno baaritaanno, ama inaan furno codsiyada u baahan cabbiraadda wicitaankaaga.
Codsiyo badan? Muxuu male-awaalka soo jeedinayaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » xclip: Kaadiyeynta kabadhka xariiqda taliska
Maqaal wanaagsan, inbadan oo sidan oo kale ah ayaa looga baahan yahay shabakadda.
Tan iyo markii aan soo gaabiyey  (badanaa danteyda gaarka ah) waxaan isticmaali jiray xclip, badanaa sababta oo ah waa desktop badan, taasi waa, dhib malahan haddii ay tahay Gnome ama KDE ama iwm, waan awoodi doonaa Xogta sabuuradda dhib la'aan 🙂
maamul su'aal sidee buu astaantaada qaangaarka ahi u soo baxdaa oo waxaan helayaa oo keliya penguin xD waxaan rabaa astaanta yar ee T_T inay soo baxdo
Wanaagsan, xclip wuxuu i siiyaa fikrad qoraal oo faasil leh, haddii aan sax u helo qoraalka waxaan kula wadaagayaa aaggan 😀
Ku jawaab wikimx
Maqaal aad u fiican ayaa albaabada u furaya fikrado badan. Waxaan kaliya shaki ka qabaa; waxaa loo malaynayaa in loo qoondeeyay x serverka, hadaba su'aashu waxay tahay: maka shaqeyn doonaa waddan wayland mise mir ??? xmir way iska cadahay haa laakiin maya labada kiis ee kale.
sidee u fiican yahay, hal amar oo dheeraad ah oo loogu talagalay arsenal
Hyro: HTML5 OpenSource Tifatiraha leh Falanqeyn